တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဟာသအတွေး … ဟာသအမြင်
Posted by မေဓာဝီ at 5:37 AM
10/31/2006 2:17 PM
I totally agree with you, some time we encounter hard and frustrated situation to the walk of life , then we needacup of medicine, to sustain our strength, I found out Laughters are the best.
Only smart guys can convertadifficult situation to jokes, eg. in myanmar history U Paw Oo is the best.
ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ သတင်းက ဘာလဲဗျ.. ကျနော် မောင်စပ်စုပါ။
ဟုတ်တယ် မမေဓါ၊ ဒီလို စိတ်မျိုးမထားနိုင်ရင် အကုသိုလ် သိပ်ဖြစ်တယ်ဗျာ
ဒီပို့စ်ကိုလဲ ဖတ်ပြီးရော.. ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ သတင်းတွေက ဘာတွေပါလိမ့်လို့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ သတင်းစာတွေ သွားဖတ်တာ.. လားလား.. ဘောင်ခတ်ထားတာတင် မဟုတ်ဘူး.. တစောင်လုံးကို ရယ်စရာကောင်းနေတော့တာကိုး.. နောက်ဆို ဟာသ ဖတ်ချင်ရင် မြန်မာ့အလင်းနဲ့ ကြေးမုံပဲ ဖတ်တော့မယ်.. ;P
11/01/2006 12:11 AM
ခုရက်ပိုင်းဆက်တိုက်ပါနေတဲ့သတင်းတချို့ကို ရည်ညွှန်းတာပါ ကိုသန့်ဇင်အောင်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ .. ကျမစပြီးသတိထားမိတဲ့ဟာသ သတင်းတပုဒ်က ‘ထူးဆန်းသောမွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပ’ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ။ နောက်ပိုင်းလဲ အဲဒါမျိုးအကြောင်းအရာဆန်ဆန်တွေ သတင်းစာထဲ အမြဲလိုလိုတွေ့နေရတယ်လေ။
မမေဓါ ရှင်းပြမှပဲ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ဟာသလေးတွေ သိရပြီ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆို မဖတ်ဖြစ်ဘူးဗျ။ ခေါင်းစဉ်ကအစ ရယ်ရတယ်နော်။
သတင်းစာက ဟာသတွေတောင် မဖတ်ရတာကြာတော့ လွမ်းသား :P
11/05/2006 4:55 AM
လက်ရာ ပြောင်လှပါတယ် မမေ.... အကောင်းဆုံးသော တွေးခေါ်မူပါပဲ...